EYH Taxanaha Laba fiicni qaabeedka - Shiinaha Changzhou Daming Pharmaceutical Qalabka
Taxanaha EYH mabda'a laba fiicni cabbir ah inta badan waxay ka kooban tahay saddex qaybood: durbaanka rotor, hayayaashii Escuardo iyo jir. durbaanka rotor waxay ku taalaa on hayayaashii Escuardo, oo ay taageerayaan afar giraangirood oo u qardarin axial ay waxaa loo sameeyaa laba giraangiraha chock. Laba ka mid ah afar giraangirood oo badi waxa wada qoqobada nidaamka awoodda in la sameeyo isku beddesha dhululubo ah. hayayaashii Escuardo waxaa kexeeyey by set oo ah crankshaft bar oscillating kaas oo la dhajinta on jir ah iyo hayayaashii dharbaaxay waxaa lagu taageeray on jir ah. Maqaallo dhululubo The qoqobada of EYH laba di ...
Taxanaha EYH laba fiicni cabbir ah inta badan waxay ka kooban tahay saddex qaybood: durbaanka rotor, hayayaashii Escuardo iyo jir. durbaanka rotor waxay ku taalaa on hayayaashii Escuardo, oo ay taageerayaan afar giraangirood oo u qardarin axial ay waxaa loo sameeyaa laba giraangiraha chock. Laba ka mid ah afar giraangirood oo badi waxa wada qoqobada nidaamka awoodda in la sameeyo isku beddesha dhululubo ah. hayayaashii Escuardo waxaa kexeeyey by set oo ah crankshaft bar oscillating kaas oo la dhajinta on jir ah iyo hayayaashii dharbaaxay waxaa lagu taageeray on jir ah.
dhululubo The qoqobada of EYH laba fiicni cabbir guuro karaa laba-jihada waqti isku mid ah. Mid ka mid ah waa wareeg ee durbaanka iyo kuwa kale ee la dharbaaxay ee durbaanka weheliyaan hayayaashii Escuardo ah. Qalabka la isku la isku beddeli doonaa marka durbaanka waxaa qoqobada, iyo doonaa in lagu qaso bidix iyo midig marka dhululubo la dharbaaxay. Sidaas darteed labadan dhaqaaq, qalabka lagu qasi karaa si buuxda waqti gaaban. EYH laba fiicni cabbir ku haboon yahay la isku qasin qalabka budo iyo qaabka granule.
nooca Volume (L) mugga Loading (L) Quudinta miisaanka (kg) size Guud (mm) Power (kw)
A B C D M H beddesha dhaqdhaqaaqdo
Previous: Taxanaha DSH Double Ku marooji koorta fiicni
Next: Taxanaha HJ fiicni koorta double
Daab Machine dhexgalo
Bacrimin Machine dhexgalo
Bacrimin Powder dhexgalo Machine
High hufan Pharmaceutical Machine dhexgalo
Fiicni / Iyada oo Engine darran dhexgalo
Machine qodan Pharmaceutical
Powder Machine qodan
Rubber Machine qodan
Taangiga Model dhexgalo-Machine
Saddex qaabeedka Dhaqaaqu fiicni
Berkeddii Nooca fiicni
Nooca berkeddii Machine qodan
Taxanaha HJ fiicni koorta double